नेपालमा नेत्रहीन क्रिकेटः मनबाट देखिन्छ दृश्य ! – mYKantipur.Com
नेपालमा नेत्रहीन क्रिकेटः मनबाट देखिन्छ दृश्य !
नेत्रहीन क्रिकेटर रमेशबहादुर बानियाँ
२०१४ मा दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपमा छनोट भए पनि आर्थिक अभावकै कारण सहभागिता जनाउन सकेनन् । यति धेरै प्रतियोगितामा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाइसक्दा पनि आर्थिक कारणले खेल्न जान नपाउनु दुःखद भएको नेत्रहीन क्रिकेट संघका संयोजक निरोज गिरी बताउँछन् ।
हरेकपटक विदेश जाँदा अफ्ठ्यारो भोगेका उनीहरुले पाकिस्तान जाँदा भने भुल्नै नसकिने दुःख पाए । नेपाल फर्किएपछि पनि राज्यले गरेको व्यवास्ताले झन दुःखी बनायो ।
वार्षिक तालिका बनाएर काम गरे पनि समस्याहरु आइरहँदा अप्ठ्यारो हुने गरेको घिमिरे बताउँछन् ।
‘सानैमा पोखराको बगरमा क्रिकेट खेल्न सुरु गरेको थिएँ । क्रिकेट’bout थाहा नै नभएकाले धेरै अˆठ्यारो भयो । बुझ्दै सिक्दै गएपछि भने सजिलो भएको छ’ अहिले नेत्रहीन महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान रहेकी भट्टराईले भनिन्, ‘अझै पनि अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नै कमजोर छ ।’
यी खेलाडीहरुले पारिश्रमिकको त कुरै छाडौँ खेल्ने मैदानको समेत अभाव झेल्नु परेको छ ।
नेत्रहीन क्रिकेट खेलिरहेका सूर्यप्रसाद भट्टराई
नेत्रहीन क्रिकेटले पाएको सफलता र उनीहरुको भोगाइ’bout यति धेरै चर्चा गरेपछि तपाईंलाई चासो हुनसक्छ, आँखा नदेख्नेहरुले कसरी क्रिकेट खेल्दा हुन् ?